Myanmar Web Store အား January 2015 တှငျ စတငျအကောငျအထညျဖျောတညျထောငျခဲ့သညျ။ Myanmar Web Store ၏ အဓိကရညျရှယျခကျြမှာ မွနျမာနိုငျငံရှိ small, medium, large business မြားအားလုံး web address(Website) ရှိစရေနျ နှငျ့ ဈေးနှနျးမှနျကနျသကျသာပွီး အရညျအသှေးအဆငျ့တနျးမှီအောငျ စိတျရငျးစတေနာဖွငျ့ ဝနျဆောငျမှုပေးလိုခွငျးဖွဈသညျ။ မိတျဆှတေို့ လုပျငနျးအမြိုးမြိုးတှကျ Website ပွုလုပျခွငျးနှငျ့ပကျသကျသော ကိစ်စအဝဝအား Myanmar Web Store တှငျ အခမဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျနိုငျပါသညျ။
VPN သုံးခြင်းသည် ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ? Virtual ဆိုတာက အတု, Private ဆိုတာက public network မဟုတ်တာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် တစ်ချို့ company တွေက ကိုယ့်ပိုင်း Private အနေနှင့် Server တွေထောင်ပြီး service ပေးထားတဲ့ network လိုပြောလို့ရပါတယ်။ Internet နှင့် ကိုယ်ရဲ့ Device ကြားမှာ...
What is proxy server? Proxy ဆိုကတည်းက ကြားခံအဖြစ်ဆောက်ရွက်ပေးသည်လို့ အဓိပ္ပယ် ရပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေသော device နှင့် server တို့သည် public network မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။ Proxy serverကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေသော computer နှင့် server ကြားမှာ...
SSL Security for Websites SSL ရဲ့ အရှည်ကတော့ Secure Socket Layerဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းထားပေးတဲ့ စံစနစ် ဖြစ်ပီးတော့ Server နဲ့ Client ကြားအရေးကြီးတဲ့ ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပေးပို့မှုကို ကြားဝင်နှောင့်ယှက်မှုမှ သော်လည်းကောင်း ပို့လိုက်တဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေကိုကြားဝင်ပီးပြင်ဆင်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Server နဲ့ Client ဆိုတာကတော့...
Hosting type တွေကို မပြောခင် ပထမ ကျွန်တော် Hosting ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ Hosting ဆိုတာက website တွေကို store လုပ်ပေးတဲ့ နေရာပါ, သူ့ကို website တွေ store လုပ်ဖို့ ပြုလုပ်ထားပါတယ် special computer လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ special...
E-commerce Website (for every business )လို့ပြောလိုက်လျှင် Online မှ တစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချထားပြီး Website ထဲသို့ဝင်ရောက်ကာ စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ မြင်ယောင်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လူအများဟာ Shopping Center ကြီးတွေကို ဈေးထွက်ဝယ်ရတာကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိသလိုခေတ်ပေါ် Electronic Device ဖြစ်တဲ့ Smart Phone ကနေလည်း ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်ရှု ရွေးချယ်ပြီး...
Information website for your business or company Websiteဆိုတာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်က ဆိုင်ခွဲ ရုံးခွဲတစ်ခုလိုပါပဲ Websiteကနေ ဘာတွေပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ ကိုယ့်Customerတွေကို ကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှထွက်ရှိထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းတွေ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဖုန်းနံပါတ်တွေ, မြေပုံလိပ်စာတွေ, နောက်ပြီး ကိုယ့်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျေနပ်မှု/ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုရခြင်းကြောင့် ကျေနပ်ပျော်ရွင်မှုဖြစ်နေတဲ့ Customer feedback/ reviewsတွေကို...
Great Domain Name choosing for your business , company or services မိတ်ဆွေ၏ ဒိုမိန်းအမည်က မိတ်ဆွေ၏လုပ်ငန်းနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကမှတ်ပုံတင်တစ်ခုပါ။ အင်တာနက်လိပ်စာဖြစ်တဲ့ ဒိုမိန်းအမည်က စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုတွေကို အမြန်ဆုံးရရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်မယ့်အရာ (သို့) မိတ်ဆွေရဲ့ goalကို အမြန်ဆုံးပြည့်မီ ထိမိစေမည့်အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Domain Nameကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။...
WordPress site အတွက် သင်က အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် LMS Plugin ကို ရှာဖွေနေပြီလား? Learning Management System (LMS) Plugins ကို သုံးခြင်းဖြင့် သင့်က Udemy ကဲ့သို့ Online Courses များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ WordPress LMS Plugin မှာဆိုရင် Online Course Content...
# Web Design & development Services Websiteဘာကြောင့်ပြုလုပ်သင့်လဲ မပြောခင် ကျွန်တော်တို့ Myanmar Web Store၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ…… ✅ကျွန်တော်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာနိုင်ငံရှိ Small, Medium, Large Business များအားလုံး Web Address (Website) ရှိစေရန်နှင့် ဈေးနှုန်းမှန်ကန်သက်သာပြီး အရည်အသွေးအဆင့်တန်းမှီအောင် စိတ်ရင်းစေတနာဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုခြင်း...